Tatitry Ny Mpisera: Ny Sanda Lafon’ny Fanakatonana ny Aterineto ao Kamerona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Febroary 2018 4:55 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Français, русский, Português, বাংলা, English
Sarihitatra momba ny rahona, avy any amin'ny lahatsarin'ny Fikambanana Karisma.
Manenjika ny governemanta ao Kamerona ny ONG fito mpiaro ny zo nomerika noho ny fanerena ny fanakatonana ny aterineto any amin’ireo faritra roa miteny Anglisy nandritra ny telo volana mahery tamin’ny 2017, alohan’ny nieritreretan’ireo faritra ireo hanao fanambarana an'ohatra ny fahaleovanteny. Miaraka amin’ilay fanerena ny fanakatonana ny aterineto mandritra ny fotoana maro (fanakatonana im-betsaka nandritra ny fotoana fohy ireo sehatra toy ny Facebook sy WhatsApp), nalefan'ny governemanta ny tafika izay nifandona mafy tamin’ireo mpitolona miteny Anglisy .
Ny Biraon'ny Lalàna an'ny Veritas Kamerone, miara-miasa amin'ny ONG iraisampirenena “Media Legal Defense Initiative”, dia nanangana hetsika ara-pitsarana roa samihafa nanohitra ilay fanakatonana ny aterineto ao amin'ireo faritra roa miteny Anglisy. Anisan'ireo mpangataka ny Fanjakàna Kamerone, ny Telecommunications Cameroun (CAMTEL), ny Minisiteran'ny Paositra, ny Fifandraisandavitra, ary ireo orinasan-tserasera maromaro ao amin'ny firenena.
Ilay fanenjehana dia tsy mikendry fotsiny ny hanarenana ilay fanakatonana, fa ihany koa mba ho fanampiana amin'ny fanoherana ny fampiasana ilay fanakatonana aterineto ho amin'ny tombontsoa politika.
Ireo vondrona hafa mpiaro zo niomerika koa dia nametraka fintina fohy ho fanohanana ilay fanenjehana. Internet Sans Frontières sy Access Now
Momba ilay fanenjehana, nilaza i Peter Micek, lehiben’ny mpisolovava ao amin’ny Acces Now, hoe: “Manana fahafahana hametraka ny dingana savalàlana erantany momba ny zon’olombelona sy ny tany tàn-dalàna ny fitsarana ao Kamerona. Amin’ny fanambarana ilay baiko fanakatonana nataon’ny governemanta ho fanavakavahana, didim-panjakana tsy dia ilaina sy tsy mifandanja, izay navoaka teo ambanin’ny fomba feno tsy fanarahan-dalàna, afaka manome fanafody ho an’ireo olona ao Kamerona ny tribonaly ary manokatra ny lalana ho an’ireo niharam-boina tamin’ilay fanakatonana ihany koa na aiza na aiza”
Tombanan'ny Fikambanana Iraisam-Pirenena mpandrafitra ny Politikan’ny TIC ao Afrika Atsinanana sy Atsimo (CIPESA) fa nosandain'ny toekarena Kamerone vola 1,67 tapitrisa Dolara Amerikanina isanandro io fanakatonana ny aterineto io tamin'ny taona 2017.
Vao haingana izay, nanaiky ny fangatahan’ny Polisy Nasionaly ny hanakatonana ny tolotra finday nandritra ny fetiben’ny Dinagyang tao amin’ny faritry ny Nosy Visayas ny 27-28 Janoary 2018 ny Vaomiera Nasionalin’ny Fifandraisandavitra ao Filipina
Manoratra ny Fikambanana ho an’ny Media Fanolo (FMA) fa tamin’ny volana Janoary 2018 fotsiny, natao amboletra ny fanakatonana ny fifandraisana toa io nandritra ny Fetin’ilay Nazareanina Mainty, Sinulog, ary ny fetibe Ati-atihan.
Toherin'ny FMA ny fanakatonana ny aterineto noho izy io manohintohina ny zo ho amin’ny fahalalaham-pitenenana, sy ny fahazoana vaovao, tsy lazaina intsony ny fidirana amin’ny tambajotram-pifandraisana, izay manandanja ho an’ny filaminam-bahoaka. Manamarika ihany koa ilay vondrona tsy mitady tombontsoa fa kely ny porofo amin’ny fitondran’ity tetikady ity ho any amin’ny filaminana misimisy kokoa.
An-jatony no voasambotra tany Torkia noho ny fitsikeràna ny hetsik’ireo miaramila tany amin’ny tambajotra sosialy.
Nambaran'ny Minisitry ny Atitany Tiorka tamin’ny 29 Janoary fa nisambotra sy nitazona olona 311, izay voalaza fa naneho hevitra nitsikera ny ezaka nataon’ny miaramila mba hanosika milisy Kiorda hivoaka ny Faritra Avaratr’I Siria, ireo manampahefana. Anisan’ireo voatàna, izay nolazain’ny manampahefana fa manapariaka “fampielezankevitra mampihorohoro”, ireo mpanao gazety, ireo mpitolona ary ireo mpanohitra ara-politika.
Niharan’ny fiampangana heloka bevava ny vehivavy Thai iray izay nizara tantaran’ny BBC tao amin’ny Facebook.
Ny 18 Janoary, nahazo fampiantsoana avy amin’ny Polisy i Chanoknan Ruamsap, mpitolona iray manohitra ny junta ary mpikambana ao amin’ny Vondrona Demokrasia Vaovao, izay milaza fa voaheloka araka ilay lalàna Thailandey malaza momba ny faniratsiràna na “fanevatevana mpanjaka” izy tamin’ny fizarana ny tatara iray avy ao amin'ny BBC momba ny Mpanjaka Vajiralongkorn. Tamin’ny volana Desambra 2016 no nizarany ilay lahatsoratra. Noho ny fahafantarany ny sazy izay mety hihatra amin’ny – 15 taona an-tranomaizina – nanapaka hevitra ny handositra ny firenena ilay vehivavy. Niteny tamin’ny Prachtai, orinasa mpanao gazety iray tsy miankina izy, hoe, “30 minitra raha be indrindra no nananako mba hanapahana hevitra hoe hijanona sa handeha. Ny tena sarotra dia ny zavamisy hoe tsy hiverina intsony aho ao aorian’ity diako ity.”
Iharan’ny fampitahorana ataon’ireo polisy ny lehilahy iray ao Myanmar, teny fankahalana ao amin’ny Facebook.
Miatrika fampihorohoroana ao amin’ny aterineto ny lehilahy iray ao Myanmar taorian’ny fisamborana tsy ara-dalàna nataon’ny polisy azy ary ny namoahany ny momba izany tany amin’ny Facebook. Filazana tao amin’ny Facebook no namalian’ny polisy, tao anatin’izany, nanamelohany ilay lehilahy ho namorona ilay olana ary nampiseho ny anarany sy ny finoany, izay Silamo. Noho ny adim-poko sy ny adim-pinoana ao Myanmar, mahatonga azy ho mora iharan’ny herisetra an-tserasera izany. Na efa nofafan'ilay toby aza ilay filazana, voa mainka niha-navesa-danja ireo fanehoankevitra feno fankahalàna niantefa tamin’ilay lehilahy tato anatiny andro vitsy. Niteny ny polisy ao Yangon fa hanao fanadihadiana ho setrin’izany izy ireo.
Mahazo vahana ao Shina ny hetsika #IzahoIhanyKoa na dia eo aza ny fanivanana ireo fehezanteny toy ny hoe “manohittra ny sotasota ara-nofo” any amin’ny tambajotra sosialy. Taorian’ny fandroahana an’i ChenXiaowu, ilay profesora malaza tao amin'ny Oniversiten'i Beihang, mpampianatra noho ny fanendrikendrehana maro momba ny fitondrantena mamoafady, angatahan'ireo mpianatra sy ireo mpianatra fahiny manerana ireo Oniversite roa ambin’ny folo ao Shina, amin’ny alàlan'ny fampiasana ny tenifototra #AoAnatinyDaholo, ny fanamboarana lalàna manameloka ny fitondrantena mamoafady any amin’ireo Oniversite (izay mateti-pitranga ao Shina). Na efa natao aza ny antso toy izany tamin’ny lasa, mbola tsy misy politika marim-pototra napetraka hatramin’izao.
Manokatra tambajotra WiFi nasionaly maimaimpoana i St. Lucia.
Ny 24 Janoary, nanambara ny fizotran’ny fametrahana ny Tambajotra Mamakivaky ny Nosy ny governemanta ao St Lucia, tetikasa mahatratra 4 tapitrisa Dolara Amerikanina mba hametrahana ny aterineto manerana ilay nosy Karaibiàna. Hanome aterineto maimaimpoana na amin’ny vidiny mirary any amin’ireo toerana fampiasan’ny daholobe ho an’ny mponina ao an-toerana sy ny vahiny ilay tambajotra. Fiaraha-miasa amin’ny governemanta ao Taiwan ilay tetikasa, izay mahatratra 3,28 Dolara Amerikanina ny fandraisany anjara. Tombanana ho voapetaka ao anatin’ny telo volana ilay tambajotra.
Mpitsikilo WiFi ao anaty fiarandalamby ambanin'ny tany any Buenos Aires.
Asehon'ny fanadihadiana iray vaovao nataon’I Vice Argentina fa na maimaimpoana tokoa aza ny tambajotra WiFi ao amin’ny fiarandalamby ambanin'ny tany ao Buenos Aires, dia manangona ny mombamomba ny mpampiasa azy izy io, ao anatin’izany ny anaran’ilay olona, ny adiresin’ny tranony, ny laharana finday, ny laharan’ny karapanondro, ny toerana misy azy — ary arakarakin’ny nandaminana ny fitaovana ampiasainy – dia mety mbola betsaka, ao anatin’izany ireo sary.
Mitsikilo fotodrafitrasa sy zavatra maro i Strava.
Rehefa namoaka andiana sarintany, izay maneho hoe aiza ny toerana misy ireo tena mpampiasa azy, ny orinasa tompon’ny Strava, fitaovana fitsikilovana fotodrafitrasa, tafavoakany tsy tamin'ny nahim-pony ny toerana misy ireo toby miafin’ny miaramila. Manambara ilay orinasa fa tafavoaka ho hitan'ny dahlobe ireo angondrakitra ireo satria navelan’ireo mpampiasa azy hisintona io torohay io ilay fampiasa, tamin'ny fanamafisana fa tokony “nanàla” ilay fitsongoana dia izy ireo rehefa miditra faritra miaramila. Nitatitra ihany koa ny Guardian fa “mamela ireo mpampiasa azy hizaha ny anaran’ireo olona hafa” ny tranokalan’ny Strava, izay miteraka olana hafa momba ny fiainana manokana.
Te-hanana mpanaraka ao amin’ny Twitter bebe kokoa? Afaka vidianao ao amin’ny Devumi izany.
Mandinika ny antony maizina amin’ny fisian’ny hosoka any amin’ny tambajotra sosialy ny fanadihadian’ny New York Times tao amin’ilay orinasa tsy mazava loatra “Devumi” ao Etazonia. Mivarotra kaonty ho an'izay rehetra mila “mametraka dindo” any amin’ny tambajotra sosialy ilay orinasa, ary hita hao toa nampiasa ireo anarana, sary mombamomba ny tena, ary ireo angondrakitra manokan'ny mpampiasa Twitter amin’izao fotoana izao mba hamoronana kaonty hosoka maherin’ny 5 alina izay amidiny hakàna tombony.
Spying on a Budget: Inside a Phishing Operation with Targets in the Tibetan Community… Fitsikilovana Tetibola: Ao anatin'ny Hetsika Fanjonoana izay Mikendry ny Vondrom-piarahamonina ao Tibet – The Citizen Lab.. Ny Citizen Lab
Digital Deceit: The Technologies Behind Precision Propaganda on the Internet… Fitaka Nomerika: Ireo Teknolojia Ambadik'ireo Fampielezan-kevitra Any Amin'ny Aterineto – New America Foundation
Fit Leaking: When a fitbit blows your cover… Fivoahan-kevitra: Rehefa nanimba ny fiafenanao ny fivoahan-kevitra – John Scott-Railton
Misorata anarana hahazo ny Tatitry ny Mpisefa (Netizen Report)
Nandray anjara tamin'ity tatitra ity i Afef Abrougui, Ellery Roberts Biddle, Marianne Diaz, Mohamed ElGohary, Rohith Jyothish, Leila Nachawati, Karolle Rabarison, Elizabeth Rivera, Nevin Thompson ary i Sarah Myers West